SEA Games - 2013 - Myanmar Athletes Hightlights
ြ​မန်မာ့ေ​ဘာ်​လီေ​ဘာ​အား​ကစားသမားေ​အာင်သူ နှ​င့်ေ​တွ့​ဆုံေ​မြ​မန်ြး​ခ​င်း
ရန်ကု​န်ြ​မို့​​၏ေ​န့​​လယ်ခ​င်း၊ အပူချိန်အြ​မ​င့်​ဆုံး​သို့ေ​ရာ​က်ေ​နချိ​န်ြ​မန်မာေ​ဘာ်​လီေ​ဘာ​အား​ကစား​သ​မားများ​မှာေ​အာင်ဆ​န်း​ကွ​င်း​၌ေ​လ့ကျ​င့်​ခ​န်း​ဆ​င်ြး​ပီး အလုပ်များေ​နြ​က​သ​ည်။ န​ည်ြး​ပများ​နှ​င့် ကစားသမား​အား​လုံး​တို့​​မှာြ​ခ​စ်ြ​ခ​စ်ေ​တာက်အ​ပူချိန်ကို အံ​တု​ကာ ဒီ​ဇင်ဘာ​လ​တွ​င် ကျ​င်း​ပ​မ​ည့် ဆီး​ဂိ​မ်ြး​ပိုင်ပွဲ​အတွ​က် ကစား​န​ည်းဗျူ​ဟာများ​ကိုေ​ဆွး​နွေးလျှက်ရှိ​သ​ည်။ စိတ်ဓါ​တ်ြ​ပ​င်ြး​ပသ​ည့်​ကစား​သ​မားများ​အြ​ကား​မှ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွ​ယ် ကစားသမားေ​လး​မှာေ​အာင်သူြ​ဖစ်သ​ည်။ သူ​၏ နှစ်လို​ဖွ​ယ်ေ​ကာ​င်း​သ​ည့် အြ​ပု​အမူနှ​င့် ထူးြ​ခား​သ​ည့် ရှ​မ်း​တို​င်း​ရ​င်း​သားေ​လ​သံ တို့ေြ​ကာ​င့် ကျန်လူများ​နှ​င့် တမူ​ကွဲေ​န​သ​ည်။
ရှ​မ်ြး​ပည်န​ယ်၊ေ​ညာ​င်ေ​ရွှြ​မို့​ အင်းေ​လး​ဇာတိသားေ​အာင်သူ ရန်ကုန်သို့ေ​ရာက်ရှိြ​ပီး ဆီး​ဂိ​မ်ြး​ပိုင်ပွဲ​အတွ​က်ေ​လ့ကျ​င့်ေ​ရး​ဆ​င်းေ​န​သည်မှာ လေ​ပါ​င်း ၂​၀ ကျော်ြ​ကာြ​မ​င့်​ခဲ့ြ​ပီြ​ဖစ်သ​ည်။ ဇာတိြ​မို့​​၏ အဓိက အား​ကစား​မှာေ​ဘာ်​လီေ​ဘာြ​ဖစ်သ​ည့်​အလျော​က် ၁​၆ နှစ်သား​က​တ​ည်း​က​ပ​င်ေ​ဘာ်​လီေ​ဘာ ကစား​လာ​ခဲ့ြ​ပီး ကျော​င်း​သား လ​က်ေ​ရွး​စင်အ​သ​င်း​တွ​င်ေ​တာ​က်လျှောက်ပါ​၀င်ခဲ့​သ​ည်။ ၂​၀​၁​၁ ခုနှ​စ်​၌ ထို​င်း လိဂ်တွ​င် ကစား​ရ​န်ေ​အာင်သူ​ကို ထို​င်းနိုင်ငံ Air Force က​လပ်က ငှား​ရ​မ်း​ခဲ့​သ​ည်။ နာမ​ည်ကျော်​ကစားသမားေ​လး​မှာ ချန်ပီ​ယံ ဂုဏ်ပုဒ်ကို အရ​ယူြ​ပီး အမိြေ​မ​သို့ြ​ပန်လာ​ကာ အား​ကစားသမား​ဘ၀​တက်လ​မ်း​တွ​င် မှတ်တို​င် စိုက်ထူနိုင်ခဲ့​သ​ည်။
ရည်မှ​န်းချ​က်ြ​ကီး​သ​ည့် သူ့​​အတွ​က်ေ​အာ​င်ြ​မင်မှု​ရ⁠ရ​န်ြ​ကိုး​စား​ရသ​ည့်​အလျော​က် စွ​န့်​​လွှတ်ခဲ့​ရ​သည်များ​လ​ည်း ရှိ​သည်ဟု သူ​က ဆို​သ​ည်။ တစ်ပ​တ် (၆) ရ​က်၊ တစ်ရ​က် (၂)ြ​ကိ​မ်ေ​လ့ကျ​င့်​ခ​န်း​ဆ​င်းေ​နရ​သ​ည်ြ​ဖစ်ရာ အင်းေ​လး​ကန်ရှိ မိသား​စု​အတွ​က် အချိန်မ​ရှိ​သေ​လာက်ပ​င်ြ​ဖစ်သ​ည်။ မည်သို့​​ပ​င်ြ​ဖ​စ်ေ​စေ​အာင်သူ​ကို ပံ့ပိုး​မှု အြ​ပု​ဆုံး​မှာ သူ​၏ မိသား​စု​ပ​င်ြ​ဖစ်သ​ည်။ လက်ရှိ​တွ​င်ြ​မန်မာနိုင်ငံ​မှ ၀ိ​ဇ္ဇာ​ဘွဲ့​ ယူ​ရ​န် ဒ​ဂုံ​တ​က္က​သိုလ်တွ​င် စာ​ရ​င်း​သွ​င်း​ထားြ​ပီးြ​ဖစ်သ​ည်။ သို့ေ​သာ် ဆီး​ဂိ​မ်ြး​ပိုင်ပွဲ​အတွ​က်ေ​လ့ကျ​င့်​ခ​န်း​ဆ​င်ြး​ပီး မ​အား​လ​ပ်နို​င်ေ​အာ​င်ြ​ဖ​စ်ေ​န​ရာ စာေ​လ့​လာနိုင်ရ​န် အခက်အ​ခဲ​ရှိ​သ​ည်။
လာ​မ​ည့် ဆီး​ဂိ​မ်ြး​ပိုင်ပွဲ​တွ​င် ပါ​၀င်ရ​သ​ည့်​အတွ​က် စိတ်လှုပ်ရှား​မိ​သည်ဟု သူ​က ဂုဏ်ယူ​စွာြ​ဖ​င့် ၀န်ခံ​ဖွ​င့်​ဟ​သ​ည်။ သူ​၏​အသ​င်း​အတွ​က်ေ​ရွှ​တံ​ဆိပ်ရ​ရန်လ​ည်း မျှော်​မှ​န်း​ထား​သ​ည်။ ဆီး​ဂိ​မ်ြး​ပိုင်ပွဲ​အြ​ပီး​တွ​င် ထို​င်း ပ​ရို​လိဂ်တွ​င် ပါ​၀င်ရ​န် က​မ်း​လှ​မ်း​ခံထား​ရသ​ည်။ အေ​ရှ့ေ​တာင်အာ​ရှ​၏ အေ​ကာ​င်း​ဆုံးေ​ဘာ်​လီေ​ဘာ​ကစားသမားြ​ဖစ်လာ​ရ​န် စိတ်အား​ထက်သန်တ​က်ြ​ကွေ​သာေ​အာင်သူ​က မျှော်​လ​င့်​ထား​သ​ည်။
အေ​ရှ့ေ​တာင်အာ​ရှ​အား​ကစားြ​ပိုင်ပွဲ​အတွ​က်ေ​လ့ကျ​င့်ေ​နသောြ​မန်မာေ​ဘာ်​လီေ​ဘာ​အသ​င်း​မှ ဂုဏ်ယူ​ရသ​ည့် ကစားသမား​တ​စ်​ဦး​မှာ ပဲခူး​တို​င်း၊ေ​တာင်ငူြ​မို့​​မှ ကျော်ကျော်ေ​ထွးြ​ဖစ်သ​ည်။ေ​ဘာ်​လီေ​ဘာ​ကစား​သ​မားမျိုး​ရိုး​မှ ဆ​င်း​သက်လာြ​ပီးေ​ဘာ်​လီေ​ဘာ​ကစား​ခဲ့​သည်မှာ ၁​၀ နှ​စ်ကျော်​ခဲ့ြ​ပီြ​ဖစ်သ​ည်။
ကျော်ကျော်ေ​ထွး​မှာ ဆီး​ဂိ​မ်ြး​ပိုင်ပွဲ​အတွ​က်ေ​ရွးချ​ယ်ြ​ခ​င်း​မ​ခံ​ရ​မီ​က ထို​င်း​လိ​ဂ်ြ​ပိုင်ပွဲ​မှ Air Force က​လပ်တွ​င် လက်ရှိ​ကစားေ​ဖာ်ေ​အာင်သူနှ​င့်​အတူ ကစား​ခဲ့​သ​ည်။ ဆီး​ဂိ​မ်ြး​ပိုင်ပြွဲ​ပီးလျှ​င် ထို​င်း ပ​ရို​လိဂ်ပွဲ​တွ​င် ကစား​ရ​န် ကစားသမား (၂) ဦး​စ​လုံး​အားေ​ခါ်​ယူြ​ခ​င်း​ခံထား​ရသ​ည်။
မန်မာနိုင်ငံေ​ဘာ်​လီေ​ဘာ​အသ​င်း​မှ အေ​တွ့​​အြ​ကုံ​အြ​ပ​ည့်​၀​ဆုံး ကစားသမား​တ​စ်​ဦး​မှာ မန္တေ​လး​တို​င်း​မှ ၀​င်း​ထွ​န်း​ဦးြ​ဖစ်သ​ည်။ြ​ပည်ပ​အသ​င်းများ​မှေ​ခါ်​ယူ​ခံ​ရသ​ည့်ြ​မန်မာ့​ပထမ​ဆုံး ပေ​ရာ်​ဖက်ရှင်နယ်က​စား​သ​မားများ အနက်မှ တ​စ်​ဦး​လ​ည်ြး​ဖစ်သ​ည်။
၀​င်း​ထွ​န်း​ဦး​မှာ အင်ဒို​နီး​ရှား​အသ​င်းနှ​င့် ဗီ​ယက်နမ်အ​သ​င်းများ​မှေ​လးြ​ကိမ်တိ​တိ ပေ​ရာ်​ဖက်ရှင်န​ယ် ကစားသမား​အြ​ဖ​စ်ေ​ခါ်​ယူ​ခံ​ခဲ့​ရသ​ည်။ ထို​ကဲ့​သို့​​စွ​မ်းေ​ဆာ​င်နိုင်ခဲ့​သ​ည့်​တို​င်ေ​အာ​င် မ​တူညီ​သ​ည့်​အသ​င်းများ အလို​က် ကြွဲ​ပား​သ​ည့်​စ​ဥ်း​စားေ​တွးေ​ခါ်​ပုံများ​ရှိ​သ​ည့်​အတွ​က် ခဲ⁠ခဲ​ယ​ဥ်း​ယ​ဥ်း​ကစား​ခဲ့​ရသ​ည်ြ​ဖစ်ရာ တ​ခဏ​သာ လက်တွဲ​ခဲ့ေြ​ကာ​င်း သူ​ကြေ​ပာ​သ​ည်။
ထို့ြ​ပ​င် အေ​ရှ့ေ​တာင်အာ​ရှ​အား​ကစား​ပွဲများ​တွ​င် ၀​င်း​ထွ​န်း​ဦး​ပါ​၀င်ယှ​ဥ်ြ​ပိုင်ခဲ့​သည်မှာ ၂​၀​၁​၃ အေ​ရှ့ေ​တာင်အာ​ရှ အား​ကစားြ​ပိုင်ပွဲ​ဆိုလျှ​င်ေ​လးြ​ကိ​မ်ြေ​မာက်ခဲ့ြ​ပီြ​ဖစ်သ​ည်။ ၂​၀⁠၀​၇ ထို​င်းနိုင်ငံ ဆီး​ဂိ​မ်း၊ ၂​၀⁠၀​၉ လာ​အိုနိုင်ငံ ဆီး​ဂိ​မ်းနှ​င့် ၂​၀​၁​၁ အင်ဒို​နီး​ရှား​နိုင်ငံ ဆီး​ဂိ​မ်းြ​ပိုင်ပွဲများ​တွ​င် ၀​င်ေ​ရာက်ယှ​ဥ်ြ​ပိုင်ခဲ့​သ​ည်။ သူ ဂုဏ်အ​ယူ​ရ​ဆုံး အခိုက်အ​တန့်​​မှာ ၂​၀⁠၀​၉ လာ​အိုနိုင်ငံ ဆီး​ဂိ​မ်းြ​ပိုင်ပွဲ​တွ​င်ြ​ဖစ်သ​ည်။ ၄​င်ြး​ပိုင်ပွဲ​တွ​င်ြ​မန်မာ​အသ​င်း​က ပထမ​ဆုံး​အြ​ကိမ်အြ​ဖ​စ် ဗီ​ယက်နမ်အ​သ​င်း​ကို အနိုင်ရြ​ပီး တ​တိ​ယေ​န​ရာ​သို့ေ​ရာက်ရှိ​ခဲ့ေ​သာေြ​ကာ​င့်ြ​ဖစ်သ​ည်။
ပွဲ​စဉ်အ​တွ​င်း သူ​၏​အသ​င်း​က ၁​၅ မှ​တ် ရြ​ပီးချိန်တွ​င် စိတ်အ​လှုပ်ရှား​ဆုံးြ​ဖစ်ခဲ့​သ​ည်။ ထို​အချိန်ခ​ဏ အနိုင်ရ​ရ​န် နီး​က​ပ်ေ​နြ​ပီြ​ဖစ်ရာ အေ​ကာ​င်း​ဆုံး​အရည်အေ​သွးြ​ပသ​ရ​န် စိတ်တ​က်ြ​ကွ​ခဲ့​သ​ည်။ သို့ေ​သာ်​လ​ည်း စိတ်မ​လှုပ်ရှား​ရန်လ​ည်း အေ​ရးြ​ကီး​သည်ဟု သူ​က ဆို​သ​ည်။
Malaysia’s Shakila aims for golden kick at SEA Games
KUALA LUMPUR: Shakila Sani Jefry Krisnan is ready to chop her way to her first karate gold medal in the 27th SEA Games in Myanmar. Shakila only managedabronze and silver in the women’s under-61kg and team kumite respectively at the 2011 SEA Games in Palembang, Indonesia. The 21-year-old, who broke into the national team in 2008, looks destined forabright future in karate. Continue Reading
Singapore: Adam, Hariss included in provisional SEA Games squad
The Football Association of Singapore (FAS) has nameda30-man provisional squad for the 2013 SEA Games in Myanmar at the end of the year. The Under-23 national squad is filled with notable names from the LionsXII and the Courts Young Lions, with Adam Swandi the only player not from either club. Continue Reading
Malaysia’s Nur Fazira hammers her way to the SEA Games
KUALA LUMPUR: Five months of intensive training under China coach Gu Yuan has paid off handsomely for teenage hammer thrower Nur Fazira Jalaluddin. She hurledapersonal best of 52.19m in the women’s hammer event at the Malaysian Open Athletics Championships at Sport Arena, Universiti Malaya, on Saturday to qualify for the Myanmar SEA Games. Continue Reading
Borneo’s Jackie Wong eyes better finish at SEA Games
KUCHING: National hammer thrower, Jackie Wong Siew Cheer is aiming to improve his performance at the coming Myanmar SEA Games in December. The 21-year-old university undergraduate is aiming to hit the 60m mark after winning gold in 57.46m at the recent Malaysia Open Athletics Championship in Kuala Lumpur. Continue Reading